Dib u eegista maalgashiga ClinkApp: Khayaano mise sharci? Sida ay u shaqeyso -
Bogga ugu weyn Dib u eegista maalgashiga ClinkApp: Khayaano mise sharci? Sida ay u shaqeyso
isha sawirka: appannie
Maqaalkani waxa uu sharaxayaa dib u eegista maalgashiga ClinkApp, sida ay u shaqeyso, iyo haddii ay sharci tahay ama khiyaano. nala joog!
Waa maxay Clink App?
Clink up waa abka kaydinta yar-yar ee loogu talagalay inuu fududeeyo kaydinta Clink waxay si toos ah lacag uga xawishaa akoonkaaga koontadaada oo ay ku maalgeliso magacaaga.
Habkaas ma heli kartid inaad wax badbaadiso oo aad naftaada u maalgeliso waxay leedahay faa'iidooyin dhowr ah waxayna ku kacday kaliya $1 bishii illaa $5000 ee ugu horreeya ee la maareeyo iyo 0.25 hantida maamulka hoos timaada.
Clink waxa uu aad u danaynayaa in uu aniga iyo adiga ku caawiyo maalgalinta lacagtayada. Waxay lacagta ku haysaa faylalka ETF. Halkan lacagtu way ka baxdaa iyada oo aan wax dhibaato ah la kulmin.
Waxa ay dadku ka yiraahdeen ClinkApp waxay isugu jireen kuwo togan iyo kuwo taban. Aan u daadagno dib u eegista
Akhri: Sida Loo Bilaabo Maalgelinta Lacagta Markii Ugu Horreysay
Legit ama Scam- ClinkApp dulmarka maalgashiga
Clink waa barnaamij maalgashi oo leh astaamo aad u wanaagsan. Waa app sharci ah oo uu sameeyay Eyal Fruchtman. Waa maamulaha guud iyo aasaasaha clink oo khibrad 17 sano ah u leh maaliyadda iyo teknoolojiyadda.
Clink wuxuu bilaabmay Febraayo 2014 wuxuuna ku orday beta muddo laba sano ah ka hor bilawga rasmiga ah ee Janaayo 2016. Clink waa "qof kasta oo raadinaya inuu dhiso mustaqbal dhaqaale ahaan la hubo da 'kasta," inta badan isticmaalayaasha hadda waxay u dhexeeyaan 20 iyo 35 jir.
Waa app toos ah oo ay doonayso in ay ku caawiso dhalinyarada inay badbaadiyaan oo ay lacag galiyaan. Adeegyadu gabi ahaanba waa bilaash sidoo kale Clink la beddeli karo ayaa lagu soo bandhigay maqaalka Forbes ee barnaamijyada maalgashiga ugu fiican.
Clink wuxuu u diyaarsan yahay si bilaash ah oo lagu soo dejiyo dukaanka google-ka. Waxa la soo dejiyay in ka badan 10 kun oo jeer. Waxay leedahay qiimeyn 3.7-xiddigle ah waxaana dib u eegay 230 qof iyo wixii ka badan.
Dib u eegista maalgashiga ClinkApp: Dulmarka Appka
App-ka waxa uu leeyahay meel aad iska diiwaan geliso oo aad gasho Fiidiyowgu waa hage lagu dejinayo jadwal kaydinta iyo maalgashiga kaas oo u dhammaystiran dhadhankaaga
Waxaad xakameysaa lacagta laga saaray akoonkaaga iyo waqtiga maalinta.
Clink ee dib u eegista ayaa si cadaalad ah u hagaagsan mana aha mid qallafsan. Waxaan filayaa in waxa ugu soo jiidashada badan ee ku saabsan clink ay tahay inay dadka ka caawiso inay wax badbaadiyaan. Firaaqada dejinta iyo hilmaanka kaliya ee ku saabsan ayaa runtii ii soo jiidatay. Sidoo kale waa sahlan tahay oo waxtar leh haddii aad rabto inaad lacag kaydsato adigoon wax badan samayn.
Akhri: Maalgelinta Hantida Guryaha ee 15 ee Bilowgayaasha 2022
Run ahaantii, abka ma fiicna… dadka qaarna waxa laga yaabaa inay ku khilaafaan sida lacagta loo maalgeliyo ama loo maamulo. Laakiin ETF-yada dhamaantood waxaa maamula Vanguard, oo u muuqda inuu yahay hogaamiye warshadeed ilaa inta aan sheegi karo - markaa waxay iila muuqataa in lacagtaadu ay ku jiri doonto gacmo wanaagsan abkan.
Clink app ma fududahay in lagu shaqeeyo waa su'aal ay dadku inta badan weydiiyaan. App-ka waxa uu leeyahay ikhtiyaaro aasaasi ah sida diiwaanka, nambarka sooshal sekuuritiga, bangiga si aad u buuxiso. Markaa waxa jira qaybta macluumaadkaaga gaarka ah oo aad sidoo kale buuxinayso.
Waa su'aalo fudud marka laga reebo su'aalaha ku saabsan dhaqaalahaaga oo aad ku dareemi karto dhib.
Su'aalahani waa lama huraan inaad ku darto macluumaadka ku saabsan xaaladaada dhaqaale iyo lambarkaaga soshal sekuuritiga taariikhda lambarka taleefanka magaca loo shaqeeyaha iyo wixii la mid ah waxaad ku xidhi kartaa credit card ama kaarka deynta abka.
Clink ma ammaan baa?
Dhib ma laha nooca qaab nololeedka aad ku nooshahay. Clink waxay gacan ka geysataa fududaynta maalgashiga qof walba iyadoo la adeegsanayo tillaabooyinka amniga heerka bangiga si loo ilaaliyo macluumaadka shakhsiyeed ee sidoo kale ilaalinta ugu badan.
Xogta xasaasiga ah waa la sir iyadoo la isticmaalayo SSL iyo 256-bit encryption
Clink ma kaydiyo macluumaadkaaga midna. Aqoonsigaaga waxa loo isticmaalaa in lagu xaqiijiyo aqoonsigaaga oo lagu xaqiijiyo qofka aad tahay.
Aqoonsigaaga bangi waxa loo isticmaalaa hal mar oo kaliya si loo xaqiijiyo oo loo xaqiijiyo in akoonku adiga iska leeyahay. Dhammaan macluumaadka kaadhka deynta waxaa kaydiya Envestnet, oo ah bixiye hormuud u ah tignoolajiyada maaraynta hantida midaysan iyo adeegyada lataliyayaasha maalgashiga.
Haddii aad isticmaalayso aaladda Apple iOS oo qalabkaagu uu taageerayo Aqoonsiga Touch waxaad awood u siin kartaa ilaalin dheeraad ah.
Faa'iidooyinka iyo khasaaraha Maalgelinta ClinkApp
Kuwani waa faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka maalgashiga ClinkApp.
Nooca Koontada xaddidan - Haddii aad leedahay akoon hawlgab sida IRA ama Roth IRA, Clink waa la xaddidi karaa.
Ma jiro cashuur-khasaare- Clink ma bixiso adeegyo goosasho-khasaare cashuureed si kor loogu qaado soo-celinta cashuurta ka dib sida Betterment iyo hore ee hantida
Ma jiro Dib-u-habayn Toos ah- Clink si toos ah uma dheellitirayso faylalkaaga sida la-taliyayaasha dhijitaalka ah qaarkood ay mararka qaarkood sameeyaan.
Kharashka Bilaha hooseeya- Qiimaha bishii Clink waa hoose $1 bishii ilaa $5000 ama 0.25%. Clink waxay si toos ah u kaydisaa lacag oo u maalgelisaa magacaaga.
Dhaqdhaqaaq lumay ma jiro- Uma baahnid inaad dhigato dime si aad akoon uga furato clink si kastaba ha ahaatee ugu yaraan ayaa loo baahan yahay si loo bilaabo maalgelinta
Portfolio Kala Duwan- Lixda lacag ee la kala beddelo waxay ka kooban tahay faylalka macaamiisha waxayna ka mid yihiin curaarta saamiyada, suuqa soo baxaya, Yurub iyo sicir bararka oo la ilaaliyo.
Lacagaha Saamiga Kharashka Hoose- Miisaaniyadaha saamiga kharash yar ee Vanguard ayaa loo isticmaalaa faylalka macaamiisha
Kaydinta Tooska ah- Waxaad si toos ah u kaydsan kartaa lacagta caddaanka ah ee aad ku leedahay akoonkaaga bangiga adiga oo dejinaya taariikhda kalandarka marka wareejintu dhacayso ama adoo ku xidhaya kaarka deynta oo aad kaydsato boqolkiiba khibrad kasta oo cunto ah.
Lump-Sum Investments- haddii aad rabto in aad kor u qaaddo ukunta buulkaaga, waxaad samayn kartaa lacag dhigaal ah oo leh xad maalinle ah $10,000.
Ma jiraan khidmadaha qarsoon - wareejinta ACH waa bilaash, marka laga reebo lacagta ganaaxa ah ee wareejinta ACH-ka, ma jiraan kharashyo kale oo ka baxsan khidmadaha maamulka
Waxay ka dhigtaa Badbaadinta iyo Maalgelinta Dadaalla'aan- Waxaad si toos ah u jadwalaysan kartaa lacagaha laguugu daro adiga oo dooranaya qaddarka iyo taariikhaha gaarka ah ee aad jeclaan lahayd inaad lacag ka soo guurto akoonkaaga hubinta akoonkaaga Clink. Waxa kale oo aad ballansan kartaa boqolkiiba kharashkaaga (mar kasta oo aad wax ka soo iibsanayso ama ku qadayso kaarka deynta) in lagugu daro akoonkaaga Clink ka dib wax kala iibsiga.
Waxaa jira faallooyin badan oo wanaagsan oo loogu talagalay Clink App iyo dhowr macaamiil ah oo aan ku qanacsanayn.
Mid ka mid ah macaamiisha ayaa leh "App-kan waxaan haystay dhawr maalmood laakiin waan ka helaa maalin kasta. Su'aalaha si degdeg ah ayaa looga jawaabaa, dadkuna waa saaxiibtinimo"
Macaamiil badan ayaa qaba in Clink uu wax ka sii fiicnaan karo
Mid kale ayaa leh "Clink waxay bixisaa adeeg aad u fiican. Si kastaba ha ahaatee, abka waa okay… Waxaan jeclahay fududaynta qaybta faylalka laakiin way fiicnaan lahayd inaan arko sida maalgashigaygu u sameynayo wanaag ama xumaan.
Laakiin dhammaantiis waa app weyn. Xusuusnow inaad akhrido, fahanto oo aad su'aalo waydiiso si aadan ugu dambayn guuldarroyin mustaqbalka fog.
Akhri: Badbaadinta vs Maalgelinta: Goorta la dooranayo & sida loo Sameeyo
SIDEE LOO QABSADAY MAR KASTA OO AAD Iibsato
Markaad ku xidhid kaarka deynta Clink, waxaad qeexi kartaa inaad rabto inaad kaydiso boqolkiiba khibrad cunto kasta. Tusaale ahaan, mar kasta oo aad iibsato tacos, waxaad go'aansan kartaa inaad rabto inaad kaydiso 10% qiimaha iibka.
Marka aad doorato sida aad rabto in aad wax u kaydsato, Clink waxa uu sameeyaa inta soo hadhay si aad u noqoto mid gacan-fudud ah - kaydintaada si toos ah ayaa loo maalgelin doonaa
Dib u eegista maalgashiga ee Clink App waxay na siinaysaa aragti weyn sida shirkadu u shaqeyso. Wanaag iyo xumaan. Ma fiicna laakiin waxa hubaal ah in ay u soo bixi karto wax qiimo leh.
Dib -u -eegista Turbotax 2022: Sida ay U Shaqeyso
Waa wax la wada og yahay in kaydinta lacagtu ay leedahay faa’iidooyin. Lacagta la keydiyey ayaa mararka qaarkood ka badbaadin karta mid ka mid ah dhacdooyinka lama filaanka ah…
Sida Loo Maalgaliyo Sanduuqa Hedge Sanadka 2021 | Waxyaabo Hubaal ah Waa inaad Ogaataa
Haddii aad raadinayso siyaabo aad lacagtaada ku heli karto lacag dheeraad ah markaad samaynayso…
Wanaajinta vs Wealthfront vs Acorns: 2022
Sanadihii 80aadkii iyo 90-meeyadii, waxaa jiray dhowr barnaamijyo maalgashi oo aad ku kori karto lacagtaada.…